Ugile izimanga ezuza o-A abawu 7 emakhaya | Isolezwe
Ugile izimanga ezuza o-A abawu 7 emakhaya
Isolezwe / 3 January 2013, 11:07am / MHLENGI SHANGASE
UNONDUMISO Mkhize, oqutshulwe, odabule o-A abayisikhombisa ofunda eVelangaye Comprehensive, eNkandla. Uhalaliselwa ozakwabo o-Zandile Sibeko, Snothile Makhubu, Siyabonga Linda nothishanhloko wakhe uDkt Ngogi Mahaye. Isithombe: MBALI KHANYILE
UGILE izimanga umfundi waseVelangaye Comprehensive, eNkandla odabule o-A abayisikhombisa waqopha umlando ngokuba ngumfundi wokuqala ukuthola o-A abangaka kulesi sikole.
UNondumiso Mkhize (18) waseNkungumathe, eNkandla, uqophe umlando ngokuba nguyena mfundi wokuqala ukuthola o-A abangaka kulesi sikole esenza kahle minyaka yonke.
Lesi sikole esisemakhaya sazakhela igama ngokuthi kusuka abafundi ngisho bakoGoli nakoMpumalanga bayofunda kusona.
UNondumiso okhuliswe ngu-anti wakhe ohola impesheni yokukhubazeka, uthe ukufunda ubusuku nemini nokubamba umgonqo yikhona okumenze wadabula kanje.
Uthole o-A esiZulwini, English, Maths, Life Orientation, Geography, Physical Science neTourism.
“Ngikhuliswe u-anti nogogo abazali bami angibazi, ngabagcina ngisemncane. Bengihlala emqashweni ngasesikoleni lapho bengihlala ngidla khona incwadi,” kusho uNondumiso ehlengezela izinyembezi.
Uthe ufuna ukwenza iziqu zobudokotela eNyuvesi yaKwaZulu-Natal lapho esethathiwe khona.
“Inkinga njengoba ngikhuliswe u-anti ohola impesheni anginawo umfundaze ozongiqhuba ngikwazi ukufeza amaphupho ami. Ngingajabula uma ngase kube noMsamariya olungile ongangisiza,” usho kanje.
Uthe ubonga kakhulu uthishanhloko wakhe uDkt Ngogi Mahaye ngokuqinisekisa ukuthi bathola imfundo esezingeni.
UMahaye uthe uqophe umlando uNondumiso ngokuba ngumfundi wokuqala ukudabula kanje esikoleni esidonsa kanzima.
Uthe izinhlelo ezifaka ne-Operation Vimba Ivila zibasize kakhulu ngoba abafundi bayabhekelelana kungabikhona ongeke afunde aphase ngoba elambile.
“Kuba nezinhlelo eziningi okubalwa nomgonqo lapho kuhlala khona esikoleni kudliwe incwadi nje. Lezi zinhlelo zisiza kakhulu ngoba abafundi bathi beya kobhala babe sebekulungele ukubhala, sebephasa,” kusho uMahaye.
Uthe uMkhize yingane ezithobile, ephansi kodwa eyenza ngokuzikhandla umsebenzi wayo futhi enenhlonipho.
“Kuyasijabulisa uma emakhaya sikwazi ukukhiqiza izingane ezifana naye ezincintisana nezasemadolobheni ngoba yize kunezinselelo kodwa kuyasetshenzwa. Noma kungathiwa usemadolobheni noma emakhaya usangaphasa ngamalengiso,” kusonga uMahaye.